Ama-routers ahambisana ne-HomeKit kuzoba nzima ukumisa | Ngivela kwa-mac
Ama-routers ahambisana ne-HomeKit kuzoba nzima ukumisa
E-WWDC ngonyaka odlule, i-Apple yamemezela inhloso yayo yokwethula imizila emisha ehambisana ne-HomeKit ezoqinisekisa ukuxhumana okungcono namadivayisi ahambisanayo. Futhi kuzobanikeza ukuphepha okwengeziwe. Akukho okuningi okwaziwayo ngalezi zinsimbi kusukela ngaleso sikhathi, kepha sibonga imininingwane yokuxhaswa evela enkampanini, Kwaziwa ukuthi kunzima kakhulu ukumisa.
Njengoba besho, ngawo wonke amandla kuza umthwalo omkhulu. Ukwandisa ukuphepha nokusebenza kwamadivayisi we-HomeKit kuzokwenza izinyathelo zokuqala zibe nzima kakhulu. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi kufanelekile ukuhlupheka kokuqala.
Amanye ama-routers aphephe kakhulu futhi ayinkimbinkimbi
Uhlelo lwe-Apple's HomeKit luthembisa ukuguqula ikhaya lakho libe ngumlingani omuhle. Kepha ukuba namadivayisi amaningi futhi axhumeke ku-Wi-Fi futhi kusho ukuba sengozini enkulu kubangani babanye. Kungakho i-Apple ifuna ukuthuthukisa i-hardware lapho konke lokhu kudluliswa kudlula khona.
Kusukela ngonyaka odlule I-Apple ifuna ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuxhumeka nokuphepha kwabo. Kodwa-ke, ngenxa yalokho okufundiwe ekhasini lokuxhaswa le-Apple, ukumiswa kwabo ngeke kube lula.
Lawa ma-routers azodinga idivayisi ngayinye ye-HomeKit esivele isebenza ekhaya lakho, kuzofanele banqanyulwe futhi baphinde balungiswe kabusha ngezivumelwano ezintsha. Kusukela kumadivayisi nangokusebenzisa ngamunye wabo, singakhetha inketho ephephe kunazo zonke ezoqinisekisa ukuthi isesekeli se-HomeKit singaxhumana ne-HomeKit kuphela ngamadivayisi wakho we-Apple.
Ungakhetha phakathi kwamazinga amathathu okuphepha:
Kukhawulelwe: Ngokuqinisekile. Isesekeli singaxhumana kuphela ne-HomeKit ngamadivayisi wakho we-Apple. Isesekeli ngeke sixhumeke kwi-Intanethi noma kunoma iyiphi idivayisi yasendaweni, ngakho-ke izinsizakalo ezivela eceleni ezifana nezibuyekezo ze-firmware zingavinjelwa.
Ngokuzenzakalelayo: Ukuphepha okuzenzakalelayo. Isesekeli singaxhumana ne-HomeKit kanye nokuxhumeka okunconywe ngumenzi wayo.
Ngaphandle kwemikhawulo: Kuphephe kancane. Lokhu kulungiselelwa kudlula umzila ophephile futhi kuvumela isesekeli ukuthi sisebenzisane nanoma iyiphi idivayisi kunethiwekhi noma isevisi esuselwa ku-inthanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ama-routers ahambisana ne-HomeKit kuzoba nzima ukumisa
futhi futhi kusho
Ngicabanga ukuthi kukhawulelwe okufanayo kuhlelo lokusebenza lwasekhaya kuzokwazisa uma ngabe idivayisi kufanele ivuselelwe, noma uhlelo lokusebenza lwedivayisi uqobo lwayo, kepha ngithanda ukwazi ukuthi uma kuvinjelwe idivayisi futhi ingaxhumana ne-Alexa.
USteve Jobs ubezohlanganisa iminyaka engama-65 namuhla
Ungawuzwa kanjani umsindo wokuqala futhi kwi-Mac